‘डाक्टर केसीले जुनतारा मागेका होइनन्, राज्यले सुन्‍नुपर्छ’ « Naya Bato
‘डाक्टर केसीले जुनतारा मागेका होइनन्, राज्यले सुन्‍नुपर्छ’
डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। तर, सरकारी पक्ष न त उनका माग सम्बोधन गर्नेतर्फ गम्भीर बनेको छ, न त जीवन रक्षामै पहल भएको छ। १९ औं पटकसम्म अनसन थालेका डा. केसीलाई राज्यपक्षबाट आजसम्म यति लामो समय उपेक्षा गरिएको यो पहिलो पटक होइन।
अझै पनि सरकार एउटा सत्याग्रहीको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने कुरामा टसमस भएको छैन। लगातारको अनसनले डाक्टर केसीको शरीर शिथिल बन्दै गएको अवस्थामा उनको समर्थनमा आवाज पनि उठ्दै गएको छ। जुम्लाबाट १९ औं अनसन सुरु गरेका केसीको अनसनको २१ औं दिनमा स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ।
स्वास फेर्न गाह्रो र छाती दुख्ने समस्याबाट पीडित केसीलाई अक्सिजन दिन थालिएको छ। डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरु आन्दोलित छन्। आवासीय चिकित्सकहरुले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज परिसरमा धर्ना दिएका छन्।
एउटा डा.गोविन्द केसी जस्तो मान्छे सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ। यो कुनै हिंसात्मक होइन्, आफ्नो जीवनलाई एउटा स्टेजमा राखेर उहाँ सत्याग्रहमा बस्‍नु भएको छ।
सरकारले केसीका माग बारे सुन्‍नु पर्यो नि। यसले जनतामा सरकारप्रति आएको उदेक र आक्रोश राम्रो छैन। आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर सत्यको लागि लड्ने मानिसको कुरा त सुन्‍नु पर्यो नि राज्य भएपछि त।
हाँका मुख्य–मुख्य माग जुन छन् जुम्लामा मेडिकल खोल्ने, विधेयकमा संशोधन गर्ने लगायतका केही माग पूरा गर्न सकिन्छ। उहाँले जुन-तारा मागिराख्नु भएको छैन। गर्न सकिने मागहरु हुन्।
यी मागहरु एउटा गोविन्द केसी र उसका स्वार्थ समूहका लागि होइन। यसले नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई नै सुधार गर्छ। गर्न सक्ने हो, गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन मलाई।-प्रा.डा केदारभक्त माथेमा